အဓမ္မဝါဒ ဖော်ထုတ်ရေးသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဓမ္မဝါဒ ဖော်ထုတ်ရေးသို့
Posted by peacespeaker on Sep 19, 2011 in Copy/Paste |9comments
View all posts by peacespeaker →
ဘာတွေလဲဟ အခုအထိ ဓမ္မ အဓမ္မဝါဒတွေက ငြင်းလို့ ခုန်လို့မပြီးသေးဘူးလား။ ခက်ပေါ့ပဲ။ လွန်ခဲ့သော နှစ် နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်က မြတ်ဗုဒ္ဓကို အကူအညီခေါ်ဖို့ လိုနေပြီထင်တယ်။ နိုင်ငံတော်သံဃနာယကရဲ့ အရည်အချင်းတွေက အဝိစိရောက်လောက်အောင်ကို ကျဆင်းနေပြီလား။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ သံဃမဟာနာယ ကရယ်။ အမလေး…..မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာအဖြစ်က ဆိုးလှချေလား။
ဗုဒ္ဓ ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုးကွယ်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယုံကြည်ကြတာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
အရမ်းကြီးအငြင်းပွားကြပြီးမှ ရလာမဲ့ အမှန်တရားက ဗုဒ္ဓ ရဲ့ IMAGE ကို ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်ဗျာ။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ကြ ပြောကြ ပါခင်ဗျာ။
မူးမူးနဲ့ ဖတ်လိုက်တာ Peacemaker ရူးသွားပြီလား အောက်မေ့တာ သေချာကြည့်တော့ အော်ပီကျယ် ဖြစ်နေတာကိုး။
ဘာတွေရေးထားတာလဲ ကိုယ့်လူ။ ကျုပ် အမြင် ဘွင်းဘွင်း ပြောရရင်တော့ ခင်ဗျားလဲ ဘာသာရေး ဂေါက်ကြောင် တစ်ယောက်
ပဲ ထင်တယ်။ စာရေးတာ ရိုးရိုး မရေးပဲ ရသေ့ ရေး ရေး နေတယ်။ ကိုယ့် မိသားစု ၀မ်းဝအောင် အရင် ကျွေးပြီးမှ ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓ
ဆိုပြီး ဘာသာရေးကို အော်စမ်းပါ။ တိုင်းပြည်က ဖွတ်မွဲပြာကျ နေရတဲ့ အထဲ ဘာသာရေးကြောင် ဖွတ်ကောင်တွေက တနေ့ 
တနေ့ဒို့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဘယ်လို ဟောခဲ့တာလို့တရားပေါက်နေသလို သူတော်စင်ဖြစ်နေသလို
ညာဝါးပြီး မိန်းမလုပ်စာပဲ ထိုင်စားနေကြတယ်။ တိုင်းပြည် အမှိုက်ကြီးတွေ။
ဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင်သော်မှ နားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားမယ်။လူတွေရဲ့ လက်တလုံးခြားလှည့်ပတ်နေကြတာ
ဟာဗျာ အေ၇းထဲမှာ မောင်တုတ်ဂေါက်ကြောင် ကလဲတစ်မျိုး…………………………
သူများတွေ ဝင်ပီးဆွေးနွေးနေတာကို သင်ယူစမ်းပါ/……………..
မြန်မာပြည်မှာ ဓမ္မ အဓမ္မ ငြင်းခုံမှုတွေရပ်ကြပါတော့။ အခြားဘာသာတွေမှာ သူဘာသာ ကိုယ့်ဘာသာငြင်းခုံ ကြတာနဲ့ စစ်တိုက်နေကြတဲ့အထိရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကို သတိရကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဘာ သာခြားနဲ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြလို့ နာကြည်းမုန်းတီးမှုတွေ အနာတရတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီ မဟုတ်လား။ အဲဒါကအခြား ဘာသာနဲ့မို့ တော်သေးတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာအချင်းချင်းသာ ဆက်ပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင် ပြည်သူ လူထုတွေနာချင်းကြီးမက နာလှပါတယ်။ ပျားရည်တစက်ကြောင့် ပြည်ပျက်ရတဲ့ကိန်းဆိုက်နေပါဦးမယ်။ သတိထားကြပါဦး။ မြတ်ဘုရားရဲ့ ဒေသနာတော်အရပ်ရပ်ရဲ့ ဆိုဆုံးမမှုကို နားဝင်ကြပြီး တွေ့ဆုံတိုင်ပင်ပြီး
အေးဆေးစွာ အဖြေရှာကြပါ။ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်တို့ကား လူသားတို့အား နူးညံ့စေ၏။ သိမ်မွေ့စေ၏။ အေးချမ်းသာယာမှုကို ဖြစ်စေ၏။ အချင်းချင်းညီညွတ်ပြီး လွတ်လပ်ပျော်ရွှင် ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုကို ဖြစ်စေ၏။ ထို့ကြောင့် အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းတော်မူကြပါတော့။
မြန်မာဗား၇ှင်း.. ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာက.. ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်လွန်းပြီး.. ညာစွန်းရောက်လွန်းတာကြောင့်… (လောကသစ္စာတရားအရ)အပြန်အလှန်ထိမ်းညှိတာတွေ.. (ဒီလိုအင်တာနက်နဲ့.. မြန်မာတွေကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးသွား..အခြေချနိုင်တဲ့ ဆယ်စု..ရာစုနှစ်မှာ..) ပိုပိုတိုးလို့သာဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်..။
ရှေးဥရောပက… ရိုမန်ကက်သလစ်နဲ့..ပရိုတက်စတန်င့်လို.. ကွဲထွက်သွားနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်..။
အစပိုင်းမှာကို.. အယူအဆမတူသူ..အတွေးအခေါ်မကိုက်ညီသူတွေကို.. ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နင်းတဲ့.. ဓလေ့အကျင့်နဲ့စဖွင့်ခဲ့တာတွေကြောင့်.. မေတ္တာတ၇ားနဲ့..အေးချမ်းငြမ်းချမ်းခြင်းကို.. အခြေမခံထားတာ..သတိထားမိတယ်..။
ဆိုတော့.. လွယ်လွယ်နဲ့.. ဖြေရှင်းလို့ရမယ် မထင်မိဘူး..။
တကယ်တော့… ဒီရာစုနှစ်ဟာ.. (တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကို..) ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဆိုတဲ့.. ဘာသာတ၇ားတွေ.(.အကုန်)..အကြီးအကျယ်..ချိမ်းခြောက်ခံရမဲ့..ရာစုနှစ်ပဲ..။
ဟိ ဟိ မြန်မာ အစိုးရ ခောတ်စားနေတဲ့ စကား နဲ့ ပြော ရရင် ” မတူခြားနားတာတွေ ဘေးဖယ်ပြီး ” သာသနာ ထွန်းတောက် အဓွန့်ရှည်စေချင်ကြတဲ့ သူတွေ အခြင်းခြင်း ၊
ဒေါသတွေ သံသယ တွေ ပုတ်ခတ်တာတွေ မပါ
ဘုရားရဲ့ အဆုံ့းအမ မေတ္တာတ၇ားနဲ့..အေးချမ်းငြမ်းချမ်းခြင်းကို လက်ကိုင်ထားပြီး သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင် သူ့အယူအဆ ကိုယ့်အယူအဆ များ ဆွေးနွေးနိူင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းယုံနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ post တွေ့လို့ ဆု မတောင်းတော့ဘဲ မေတ္တာ ရပ်ခံပါရစေ။
အင်း…သံဃာ့မဟာနာယကနှင့် အဓမ္မဝါဒဖော်ထုတ်ရေးကို အပြစ်တင်သူကတင်။ အကျဲတင်သူကတင်။ အရိုးဆွေးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘုရားကို အငိုခိုင်းတဲ့သူက အငိုခိုင်းလို့ခိုင်း။ ကြာတော့သာသနာဟာ လက်ခုစုတ် ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်။ ဗမာစကားပုံရှိပါတယ်။ မိအေးတို့ အားနာတတ်ပုံများ ကလေးငါးယောက် အဖေမပေါ်ဘူးဆိုတာလို ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။ မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆိုတော့လဲ ပြောရပေဦးမပေါ့။ ရန်ဖြစ်ချင်ရင်လဲ ဖြစ်လိုက်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် ခေတ်မှီမှီ ရန်ဖြစ်တတ် ဖို့တော့လိုတယ်။ ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသံမကြားရအောင် လူသားတွေကြိုးပမ်းနေ ကြပြီ။ ဒါပေမယ့် လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ စစ်တိုက်တာကိုတာရှောင်ကြဉ်ဖို့သာ ပြောတာ တခြား စီးပွားရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး လူမှုရေး လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာကို တော့ကမ္ဘာကြီးက ခွင့်ပြုထားကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယဉ်ကျေးစွာ သိမ်မွေ့စွာ ရန်တွေ့တတ်တဲ့အဖြစ်ရှိနေလို့ပဲ။ ဒါကို တော့သိထားကြဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ တဆိတ်ရှိ ဒိုင်း…ဒိုင်း….ဒိုင်း လုပ်နေဖို့ မဟုတ်တော့ဘူဆိုတာ လေးပါပဲဗျာ။